बाइडेनले टेक्ससको गभर्नरले मुखावरण हटाउने निर्णयलाई ‘पुरातनपंथी सोच’ किन भने ? - Enepalese.com
बाइडेनले टेक्ससको गभर्नरले मुखावरण हटाउने निर्णयलाई ‘पुरातनपंथी सोच’ किन भने ?
इनेप्लिज २०७७ फागुन २० गते १:२३ मा प्रकाशित
अमेरिकाको टेक्सस राज्यका गभर्नर ग्रेग आबोटएल गत मंगलबार राज्यमा मास्क (मुखावरण )हटाउने गरेको निर्णयलाई ‘राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुरातनपंथी सोच’ भनेका छन् ।
उनले बुधबार टेक्ससमा संक्रमणको संख्यामा उल्लेखनीय कमी नआएको र खोप लगाउदै गरेको अवस्थामा मास्क(मुखावरण)नलगाउनु पर्ने भनि गत मंगलबार घोषणा गरेका थिए ।
गभर्नरको चौतर्फी बिरोध र प्रतिक्रियाहरु आई रहेका छन् । गभर्नर आबोटले सय प्रतिसत मुखावरण लगाउनु नपर्ने र व्यवसायहरु खोल्न कुनै अबरोध नहुने घोषणा गरेका थिए । तर अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले अघि सारेको निर्देशन भन्दा गभर्नरको घोषणा बाझिएको छ । अर्थात् बिपरित देखिएको छ ।
बाइडेनले यस निर्णयलाई ठूलो गल्ती भने।”म आशा गर्दछु कि सबै जनाले यो मुखावरणले फरक पारेको छ। हामी मौलिक रूपमा यस रोगको प्रकृति परिवर्तन गर्न सक्षम भएका छौ किनकि हामी मान्छेको पाखुरामा खोप लिन सक्षम छौं उनले ओभल कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई भने ।